Maamulaha Kubadda Cagta Mobile 2017: boqorka maamulayaasha ayaa soo laabtay | Wararka IPhone
Maamulaha Kubadda Cagta Mobile 2017: boqorka maareeyayaasha ayaa soo laabtay
Carlos Sanchez | | Barnaamijyada IPhone
Illaa aynaan dib ugu laaban safarka ilaa a Xilli dahabi ah taas oo aynaan xitaa qiyaasi karin taleefannada casriga ah oo ay nagu hareeraysan yihiin maareeyayaal sida PC Fútbol, ​​xaqiiqadu waxay tahay in SEGA ay ku adkaatay suuqa xallinta iyo mudnaanta labada qalab ee mobilada iyo kombuyuutarka oo leh Maamulaha Kubadda Cagta. Sannadkii 2017-kii kama bixi doonno daabacaadda iPhone-ka.
1 Waa halkan
2 Horumar badan
Ballanta sanadlaha ah ee loogu talagalay kuwa jecel maamulayaasha ayaa timid, waxayna ku sameysaa si ka xoog badan sidii hore. SEGA waxaa ka go'an inay sii wado hagaajinta wax soo saarka muxaafid ahaan, iyada oo aan la helin isbeddelo waaweyn, taas oo u muuqata mid gebi ahaanba macquul ah iyada oo la tixgelinayo in ay tahay wax shaqaynayay muddo aad u tiro badan.
Laga yaabee mid ka mid ah horumarada ugu xiisaha badan waa ka mid noqoshada horyaalada Poland iyo Turkiga, tan dambe ayaa ah mid xiiso leh tan iyo markii ay weli tahay mid ka mid ah horyaalada heerka ugu sareeya adduunka waana sugeynay ciyaarta muddo dheer. Sidoo kale indha indheeyayaal ayaa la hagaajiyay si luulka soo socda uusan nooga baxsan oo waxaan la saxiixan karnaa qiimo jaban ka hor inta uusan u qarxin sida supercrack aduunka.
Laga soo bilaabo SEGA waxay xaqiijinayaan taas waxqabadka ciyaarta way ka sarreysaa tii sanadkii hore waana inay si dhakhso leh ugu shaqaysaa duruufaha oo dhan. Sida iska cad, waa inay naga caawisaa inaan ku shaqeyno terminal jiilka soo socda, laakiin si kasta oo ay ahaato marwalba waa mid xiiso leh in la arko in shaqada la qabtay oo ku saabsan hagaajinta ciyaarta oo leh culeyska processor-ka noocaas ah.
Dhinaca kale, horumarin badan ayaa laga hirgaliyay xakamaynta kooxda, iyada oo awood u leh inay qaado talaabooyin edbin ah oo ka dhan ah ciyaartoyda haddii ay leeyihiin dhaqan aan habboonayn ama haddii aysan u fulin sidii la rabay. Waxaa sidoo kale naloo ogol yahay inaan fulino ganaaxyo, sida inaan kumbuyuutarka ku ciyaareyno oo kale.
Qodob kale oo ay ku jiraan horumarin cad ciyaarta ayaa ah saxiixyada, oo weli ah mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee ciyaarta. Fursadaha ayaa la ballaariyey iyada oo ay ugu wacan tahay wareejinta iyada oo la raacayo qodobka iibsiga waxaanan awoodi doonnaa inaan ku sameysanno shaybaar qiime jaban laakiin aan ilaalinno xeeladda sannadka soo socda.
Marka la soo koobo, waxaan wajaheynaa midka aan shaki ku jirin inuu yahay maareeyaha ugu fiican sanado badan, oo kan la daabacan 2017 uu muujinayo inuu weli yahay dammaanad guul dhammaan kuwa doonaya inay qalabkaaga ka sameystaan ​​iPhone-ka. Waa run in SEGA laga yaabo inay inyar khatar gasho ama inbadan hagaajiso dhinacyada qaarkood, laakiin waxay doorbidaan inay noqdaan muxaafid waana la fahmi karaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Maamulaha Kubadda Cagta Mobile 2017: boqorka maareeyayaasha ayaa soo laabtay
Mobilada oo aan haysan liisanka horyaalka Isbaanishka, wajiyada la'aan, gaashaan la'aan ... Ma siin doono wax ka badan saddex.
Arrin kale ayaa ah haddii aad ku iibsato PC ama MAC, halkaas oo haddii aad cusbooneysiin karto magacyada kooxaha, iwm, dhig gaashaammo, wejiyo, garoomo, iwm.
Samsung ayaa ka fiirsaneysa inay iibiso Galaxy Note 7 oo dayac tiray
GoEuro wuxuu ku darayaa astaamo cusub wuxuuna ka mid yahay barnaamijyada safarka ee ugu wanaagsan sanadka